Manambara fitiavana ny ranomanitra, ka tsy vitsy ireo mora babon’ny fofona entin’ny olona iray. Azo atao tsara ihany koa ny manolotra ranomanitra atao fanomezana ho an’ny tiana,
Ny atao mba tsy hanimba hoho ny “vernis gel” …
Manampy be an’ireo vehivavy na tovovavy maika lava sady tsy manam-potoana firy hikarakarana hoho, ny “vernis gel”.
Tarehy tsy misy olana mihitsy : Mila karakaraina koa
Betsaka amin’ny vehivavy tsy manana olana loatra eo amin’ny tarehy, na manana tarehy ara-dalàna, no manapa-kevitra ny tsy hikitikitika ilay hodi-tava mihitsy sao miova ny kalitaony.
Tantely sy voasarimakirana : manala « points noirs » vetivety
Manelingelina ny maso ny fisian’ireo « points noirs » eo amin’ny tarehy sy ny orona. Raha vao tsy karakaraina haingana izy ireny dia mihamaro sady lasa sarotra esorina indray. Fomba iray azo hanesorana azy ireo ny tantely sy voasarimakirana, fa idealy kokoa sady mandaitra tsara ny karibônetra.
Ranomanitra toy ny ahoana no mety amin’izao toetrandro izao ?
Azo handrefesana lafin-javatra maro ny hanitra hanaovana. Misy olona sasany dia ny fofon-dranomanitra eny aminy no hamantaran’ny olona azy.
Mba halandina sy halefaka tsara ny tongotra
Vodi-tongotra vakivaky, fela-tongotra marokoroko sy maimaina be… tranga tsy vaovao amin’ny hatsiaka sy ny rivotra mangatsiaka izany rehetra izany. Ireto kosa ny paipaika tsotsotra azonao ikoloana tongotra ao an-trano ao, mba hialana amin’izay tongotra maina sy makiana be izay, ka hahatonga azy ho malefaka lalandava…
Manomana ny hoditra, ho any amin’ny morontsiraka
Fahafinaretana sy fialana amin’ny mahazatra no isan’ny antony fototra handehanana mamonjy ranomasina.
Na izany aza dia misy kosa ny fitspika azo arahina, raha tiana hateza eo amin’ny hohonny “vernis”. Ampiharo ange ireto e !
1- Lavitry ny masoandro no ampirimina ny « vernis »
Mampitambaingana ny “vernis” ny masoandro sy ny hazavana. Tsara kokoa raha ao anaty vata fampangatsiahana izy no ampirimina.
2- Hoho madio no hosorana “vernis”
Diovy amin’ny alalan’ny alikaola 90° na amin’ny “dissolvant” ny hoho. Kobanina tsara sy amainina tsara avy eo, mialohan’ny hanosorana “vernis”.
3- Ahontsana aloha ny « vernis »
30 segaondra eo ho eo no hanontsanana ilay tavoahangina « vernis », mialohan’ny hanosorana azy, amin’izay dia mifangaro tsara ny lokony sady miala ny rivotra tafiditra eny anelanelany.
4- « Base » no mialoha ny « vernis »
Mamelona ny hoho ny “base” no sady miaro azy amin’ny lokon’ny “vernis”, izay mahamavo azy. Mampitovy tantana ny “vernis” hahosotra ihany koa.
5- Atao roa sosona ny “vernis”
Atao manifinify avokoa ireo sosony 2 ireo. Miandry 15 mn, fara-fahakeliny, manelanelana ny hosotra voalohany sy faharoa, mba ho maina tsara ilay “vernis” voalohany.
6- Saronana tsara ny “vernis”
Rehefa tsy ampiasaina sy mandritra ny fanosorana “vernis” ihany koa, dia asio zavatra manarona foana ny tavoahanginy, mba tsy ho tafiditra ao ny rivotra.
7- “Top coat” no aorian’ny “vernis”
Mampangirana sy mampitana ny “vernis” no asan’ny “top coat”. Rehefa maina ilay sosony faharoa no ahosotra izy.
8- Mila faharetana ny manosotra “vernis”
Mangalà fotoana malalaka mihitsy rehefa hanaingo ny hoho, aza mandrairay zavatra, isaky ny avy manosotra sosona iray (“base”, “vernis” sosony 2, top coat”), fa andraso ny 15 mn fara-fahakeliny, manelanelana ny sosony rehetra.
9- Ampiasaina matetika ny “vernis”
Arakaraky ny hipetrahany fotsiny ao no mahamora mahamaina azy.
10- Tsy adino ny “dissolvant”
Raha toa ka mbola tsy foinao ny “vernis” tena fanosotrao matetika, nefa efa maina, dia andatsaho “dissolvant” kely ao anatiny, mba hampandranoka azy indray.
Isaorana ny Espace Beauté Haihaingo Andavamamba, ampitan’ny MadaHotel tamin’ny fiarahamiasa. Manome tolotra “Pack maman” ho an’ny reny mpamaky Jejoo izy ireo, izay ahitana tolotra fihenam-bidy “pose vernis-coiffure-soin du visage-maquillage” na koa “mini-relooking” ka mitondra gazety Jejoo any an-toerana. Fifandraisana : 033 82 965 29